HomeWararka Ciyaaraha MaantaWararka Suuqa Kala iisbiga: kuwa ugu muhiimsan, Sulemana, Cavani, Rice, Kane, Bellingham, De Ligt, Taylor-Hart, Szczesny
May 9, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Ajax ayaa kula dagaalameysa Manchester United saxiixa 19 jirka garabka ka ciyaara ee reer Ghana Kamaldeen Sulemana, kaasoo haatan la ciyaara kooxda reer Denmark ee FC Nordsjaelland. (Dailymail)
Manchester United ayaa u soo bandhigi doonta weeraryahanka reer Uruguay Edison Cavani lacag dhan £ 2.5m si ay 34 jirkaan ugu sii hayaan kooxda sanad kale. (TheSun)
Ciyaaryahan Declan Rice oo ka tirsan West Ham ayaa ka dhawaajiyay inuu ka tagi karo kooxda isagoo raadinaya kubad cagta Yurub ah iyadoo kooxaha Manchester United iyo Chelsea ay muddo dheer xiiseynayeen 22 jirkaan khadka dhexe ee Ingariiska. (Mirror)
Weeraryahanka Tottenham Harry Kane ayaa bartilmaameed sarre u ah Chelsea, kuwaasoo “diyaar u ah inay dalab weyn ka gudbiyaan” 27 jirkaan haddii ay jirto in ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England la heli karo. (Kubadda Cagta)
Kabtanka England Kane ayaa diyaar u ah inuu weydiisto gudoomiyaha Tottenham Daniel Levy inuu tixgaliyo dalabyada xagaagan. (TheSun)
Manchester United ayaa isha ku heysa inay lasoo saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer England Jude Bellingham, oo 17 jir ah oo ka socda Borussia Dortmund xagaagan halkii ay ka heli lahaayeen saaxiibkiis Jadon Sancho, oo 21 jir ah (Manchester Evening News)
Borussia Dortmund sidoo kale ma dooneyso inay iska iibiso weeraryahanka reer Norway Erling Haaland, oo 20 jir ah, waxayna kaliya tixgelin doontaa dalabyada 180m euros ee 20 jirkaan. (Marca)
Juventus ayaan dooneynin inay kala tagto daafaca heerka caalami ee dalka Holland Matthijs de Ligt iyadoo loo marayo dalabyo 21-sano jir ah oo ka yimid Chelsea iyo Barcelona oo durba dib loo soo celiyay. (Tuttosport)
Everton ayaa ka fiirsaneysa inay wax badan u dirto ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Cameroon iyo kooxda Fulham Andre-Frank Zambo Anguissa, oo 25 jir ah (Sunday Mirror)
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa ugu baaqay maamulka kooxda inay lacag badan ku qarash gareeyaan si loo hubiyo in Gunners ay ka mid noqoto kooxaha u tartamaya Premier League. (Sunday Star)
Dhanka kale, Gunners ayaa isha ku heysa inay heshiis cusub ka saxiixdo 18-jirka garabka ka ciyaara ee reer England Kido Taylor-Hart bisha soo socota. (TheSun)
Newcastle United ayaa qandaraaska u kordhisay daafaca reer Switzerland Fabian Schar, iyadoo 29 jirkaan uu sii joogayo kooxda ilaa 2022 (Chronicle Live)
Everton ayaa laga yaabaa inay lasoo saxiixato Poland iyo goolhayihii hore ee Arsenal Wojciech Szczesny oo ka imanaya Juventus xagaagan laakiin Paris St-Germain ayaa sidoo kale xiiseyneysa 31 jirkaan. (Calciomercato )
Chelsea ayaa isha ku heysa inay 19 jirkaan weerarka ka ciyaara Armando Broja heshiis waqti dheer ah kula gasho Stamford Bridge ka dib markii uu la dhacay ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Albania amaahda xilli ciyaareedka ah ee uu ku joogo Vitesse Arnhem, taasoo uu ku dhaliyay 10 gool oo horyaalka ah. (Thesun)
Tababaraha Roma ee soo socda Jose Mourinho ayaa raadinaya inuu soo qaato 27 jirka reer Italy Andrea Belotti oo ka socda Torino, iyadoo weeraryahanka Paris St-Germain ee reer Argentina Mauro Icardi uu sidoo kale bartilmaameed u yahay Giallorossi. Roma sidoo kale waxaa laga yaabaa inay weli raadiso inay ceshato 35 jirka reer Bosnia Edin Dzeko, kaasoo horey loo filayay inuu ka tago kooxda xagaaga. (Corriere dello Sport)
Barcelona ayaa weli xiiseyneysa xiddiga Ajax Ryan Gravenberch, oo 18 jir ah, markii ugu horeysay isku dayday inay la soo saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Holland isagoo 15 jir ah. Barca, si kastaba ha ahaatee, waxay tartan kala kulmeysaa Gravenberch, kaasoo lala xiriirinayay kooxo dhowr ah oo ay ku jiraan Manchester United iyo Juventus. (Mundo Deportivo)
Madaxweynaha kooxda Bayern Munich Herbert Hainer ayaa sheegay in kooxda reer Jarmal aysan sameyn doonin wax lacag qaali ah xagaagan, taasoo u muuqata inay meesha ka saareyso inay u dhaqaaqdo 22 jirka Inter Milan daafaca midig ee reer Morocco Achraf Hakimi. (Goal)
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa u xaqiijiyay ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Japan Takumi Minamino, oo 26 jir ah, oo amaah ku joogay Southampton inuu weli qeyb ka yahay fikirka mustaqbalka fog ee Anfield. (Goal)